The Medialink router waxaa loo arkaa inuu yahay router wireless maadaama uu bixinayo isku xirnaanta Wi-Fi. Kaliya wireless ama Wi-Fi kaliya waxay u ogolaaneysaa isku xirka dhowr qalab tusaale telefishinada casriga ah, madbacadaha bilaa wabiga ah, iyo Wi-Fi loo ogol yahay casriga.
Talooyinka Sirta ah ee loo yaqaan 'MediaLink Router Password':
Xulo baaskiil adag oo adag oo mala awaal ah oo loogu talagalay 'MediaLink' oo aad adigu dib u xasuusato.
Waa inay noqotaa wax gaar ah, tusaale ahaan ilostmyvirginity @ 20, oo macnaheedu yahay inaadan waligaa ka baaqsan doonin inaad soo xusuusato.
Mugga badqabka wuxuu si toos ah ugu xiran yahay sirta sirta ah ee passkey, iyo dadaalada la qaaday si loo ilaaliyo passkey-ka router-kaaga.
Isticmaalka marka hore
Sii Passkey-ga router-ga aad ku xasuusan doonto (marka hore la istcimaalo). Looma baahna in la sheego, waxaad abuuri kartaa passkey jahwareer leh oo leh astaamo kala duwan, tiro, griik iyo latin. Si kastaba ha noqotee dhamaadka waxaad ku dhamaan doontaa inaad ku soo gasho dhejis ah oo aad ku dhejiso routerka garaacaya ujeedada.
Magaca Beddelka ah ee Wifi (SSID) & Passkey oo lagu daray awood u siinta Shabakada
Talo yar oo dheeri ah (maadaama aysan wax saameyn ah ku laheyn nabadgelyada), ayaa ah in la beddelo magaca Default Wifi (SSID) maadaama ay dadka kale fahmi doonaan si ay u ogaadaan shabakadda ay ku xiran yihiin.
• Raadi - Dejin horumarsan (oo laga helay sanduuqa meeniska ee ku yaal bogga dushiisa), oo ku cadaadi
• Raadi - Meel-dejinta Xarig-la'aanta (oo lagu arkay sanduuqa meeniska ee ku yaal bogga dushiisa), oo ku garaac
• Raadi - Dejinta Xarig-la'aanta Aasaasiga ah (oo lagu arko sanduuqa meeniska ee ku yaal bogga hore), oo ku dhufo
Raadi Magacyada Shabakadda (SSID), kani waa magaca Wi-Fi ee Router-ka. Ka dib markaad qorto magaca shabakadda, waa inaad u oggolaataa sirta WPA2-PSK router-ka. Tani waa heerka ugu adag ee sirta lagu heli karo shabakadaha ku saleysan guryaha.
Geli furaha WPA Pre-Sharing / WI-Fi Passkey - kani waa passkeyga aad u adeegsan doonto isku xirka hoyga Wi-Fi. Ka dhig 15-20 nooc oo ha isticmaalin isla baaskeygii aad u isticmaashay soo gelitaanka router MediaLink.
Dhibaatooyinka gelitaanka router MediaLink:
MediaLink Passkey ma shaqeynayo
Dameeraha ayaa helaya waddo aysan ku shaqeyn! Ama, dhacdooyin badan, macaamiisha waxay helayaan hab ay ku tirtiraan. Labada xaaladoodba, fiiri qaybta "Sida dib loogu cusboonaysiiyo qalabka 'MediaLink Router to Default Setting'.
Halmaamay Passkey-ga loo yaqaan 'MediaLink Router'
Haddii iyo haddii kale haddii aad beddeshay magacyada adeegsadaha ama erayga sirta ah ee 'MediaLink' ama aad ilowday, eeg uun "Sida dib loogu cusboonaysiiyo qalabka 'MediaLink Router To Default Setting' qaybta.
Dib udajiso Router-ka Dejin Default
Maaddaama, nabadgelyada shabakaddu ay muhiim tahay, shaqada ugu horreysa iyo tan ugu weynba waa in wax laga beddelo router-ka MediaLink Default Login & Passkey si wax aad u ammaan ah & shaqsi ahaanba.
Raac amarrada si aad ugu soo gasho router-ka 'Medialink Router'.
Ku xir xarigga router-ka laptop-ka ama PC-ga. ...
Booqo biraawsarka xulashada & qor cinwaanka IP ee routerka Medialink sanduuqa cinwaanka. ...
Marka xigta qor usernames-ka caadiga ah & ereyada sirta ah ee router-ka si aad uhesho qalabka maamulka. Hada waad soo gashay.